Intel Inotangisa Bhiza Ridge Chip yeQuantum Computing Systems
Intel Labs yakaunza yayo nyowani cryogenic control chip codenamed Horse Ridge iyo inomhanyisa kuvandudza ye yakazara-stack quantum computing system. Zvinoenderana neIntel, Horse Ridge ichagonesa kushambadzira zvirongwa zvehuwandu zvemakomputa.
Iyo Horse Ridge cryogenic control chip ichadzora akawanda huwandu hwehuwandu (qubits) panguva imwe chete, kukosha kwakakosha kunodiwa kuvaka yakakura-yakakura yekutengeserana quantum system, maererano neIntel. Iyo chipmaker yakaedza nesilicon spin qubit uye superconducting qubit system uye inotenda kuti zvipingaidzo zvikuru zvekutengesa-uwandu huwandu hwekuenzanisa makompiyuta zvinobatana uye zvinodzora zvigadzirwa zvemagetsi, kwete kugadzirwa kwezvikamu - compute zvinhu zviripo munzvimbo dzakawanda panguva imwe chete - ivo pachavo.
Mazuva ano komputa yemuenzaniso makomputa anovimba nemagetsi aripo kuti abatanidze iyo systemum system mukati meiyo cryogenic firiji nemazuva ano computational zvishandiso zvinodzora qubit performance. Sezvo chiitiko chega chega chinodzorwa chimwe nechimwe, iyo yakakura kabhoni inodzikamisa kugona kuyera masystems emakomputa kusvika kumazana kana zviuru ezviuru zvekurova akakosha maitiro ekuita. Iyo Horse Ridge SoC inotsigira mirayiridzo inoenderana neyekutanga qubit mashandiro uye inoshandisa nzira dzakaoma kugadziriswa dzechiratidzo kududzira mirayiridzo muma microwave pulses inoshandisa nyika dze qubits. Nekuda kweizvozvo, imwe diki chip inogona kurerutsa zvikuru dhizaini yehuwandu hwekomputa.
Intel's Horse Ridge chip yakave yakagadzirwa pamwe neIntel Labs uye QuTech, mubatanidzwa pakati peTU Delft uye TNO (Netherlands Organisation for Applied Sayenzi Research). Iyo chishandiso chakagadzirwa uchishandisa Intel's proven 22 nm FinFET process technology iyo yanga iripo kubva 2012. Iyo SoC inogona kushanda pamhepo yekushisa - inenge 4 Kelvin - zvishoma inodziya pane zero yakazara.
Microsoft inounza rutsigiro rweMac neLinux kune yayo Quantum Development Kit
Honeywell inosvitsa inotevera-gen huwandu hwekombuta ine gumi maquubits
'Iyo Nhoroondo yaZelda: Kufuridzira Kwemusango' Horse Nhungamiro: Ungadzora Sei Uye Kutasva Mabhiza Uye Dzimwe Mhuka
AMD's 35W "Bristol Ridge" A-Series APUs Zvino Inowanikwa kuRetail
Intel's Maple Ridge (JHL8540) Thunderbolt 4 Mutungamiriri Iye Zvino Kutumira